Ukufikelela kwiGoogle ephezulu kunye noSemalt
Indawo eku-intanethi ilawula eyayo imithetho. Ukwenza ishishini kwi-Intanethi akufani nokwenza ishishini kwinyani. Kulula kwaye kunzima kakhulu. Ukuba awuyazi imithetho yeli lizwe, uya kuphuma ngefestile. Ukuba usebenzisa i-SEO optimization, ishishini lakho liya kusebenza njengewotshi. Ukuba ungumnini weshishini, uhlalutyo lweshishini, okanye uchwephesha wentengiso, unganomdla wokufunda ngeendlela ezintsha zokusebenzisa izixhobo zewebhu ngokufanelekileyo. Naluphi na uhlobo lokwenza imali, ukuba kusemthethweni, kungomelezwa, kuphuculwe, kwaye kuphuhliswe ukuba uyayazi imigaqo yendawo ebonakalayo.
Ndingazikhuthaza ngokwam ishishini elikwi-Intanethi?
Uve ngamabali ngabantu abaqala amashishini abo kwi-Intanethi kwasekuqaleni. Mhlawumbi aba bantu bonwabileyo bafumana ngengozi yemithetho yokukhuthaza kwiWebhu eBanzi yeHlabathi. Ngaba unokuqonda kwaye unobuqili bokunyusa ukuzimela kwe-traffic ye-e-yorhwebo? Ufanele ukwazi ntoni usomashishini we-novice? Ungalufumana phi ukhuthazo lokuzalwa kweeprojekthi ezingaqhelekanga? Ukukhangela ulwazi, uya kwimithombo eyahlukeneyo ye-Intanethi. Ukuthontelana kwalo lonke uhlobo lolwazi luza kukuhlela. Uya kuntywila kwiintricacies kunye nuances, kwaye ngaphambi kokuba ufumane naliphi na amava, uya kuba udanile kalikhulu kwindawo ebonakalayo kunye nokuvela kwayo okungenamda.
Ewe, le ndlela inokwenzeka. Unokuphumelela kwizifundo ezizodwa, uzihlawulele ngepeni entle. Ufumana ntoni ngenxa yoko? Imfumba yolwazi eluhlaza efuna ukusetyenziswa kwiimeko ezingekho mgangathweni ezingachazwanga nakweyiphi na incwadi yokufunda. Kwaye kwakhona, uya kuya kutitshala wakho, oya kukunika impendulo engaqondakaliyo. Ngoba? Ingaba kude neemeko zangempela ebomini. Uza kulahleka yintoni? Uya kuphulukana neentsuku kunye neenyanga ezixabisekileyo. Eli lixesha lamathuba akho aphulukene nawo. Ngoba? I-niche yakho yeshishini iya kuhlala, kwaye kuya kufuneka ujonge imibono emitsha kunye namathuba amatsha. Ngaba ukulungele oko?
Izixhobo zenethiwekhi zokuPhumelela
Abathengi bajonga kwiivenkile ezikwi-intanethi ngohlobo lokuthenga abanalo kwihlabathi lokwenyani. Bafuna indlela umntu ngamnye kunye nenkxaso yengqondo. Kodwa wena awukwazi ukukhonza zonke iindwendwe kwivenkile yakho ebonakalayo, ngakumbi ukuba ziza ngexesha elinye. Ukuba awukwazi ukufumana ukuzithemba kwabathengi ngendlela yendalo, amaqhinga okuthengisa aya kungakhathalelwa ikakhulu. Kungenxa yoko le nto usomashishini we-Intanethi efuna abantu abanamava abaza kulawula into yomntu, kunye nezixhobo zokulawula ezisebenzayo.
Nokuba ungayaphi na ishishini lakho, uya kudinga iseti esebenzayo yezixhobo ze-SEO kunye neengcali eziya kunceda ekuqhubeni ishishini lakho. Ukuthengisa kwaneyona nto iqhelekileyo kwi-Intanethi akukho lula njengoko kubonakala kuqala. Oko kukuthi, ukuba uza kuthengisa ifosholo enye okanye inkqubo enye, uya kuyenza kungekudala okanye kamva. Kodwa ngoku sithetha ngokuthengisa okhulayo kunye nokukhula, okufumanela ithuba lokufumana ukhuphiswano kunye nenkxaso egqibeleleyo yabathengi.
Ngokufikelela ekuhleni nasekufumaneni ulwazi ngokukhawuleza, isoftware yokuqala idlala indima ebalulekileyo kuphuhliso lweshishini. Impumelelo iya isiya kwiinkampani eziphakathi, kwaye iziqalo zixakile ngenzuzo entle. Abathengi abanokubakho bahambahamba ixesha elide etyholweni. Kuya kufuneka ulungiselele amawaka abantu abanomdla wokudlula. Umntu unokubambisa umthengi ngokuba nomdla kubomi bakhe bemihla ngemihla kunye neengxaki zakhe. Olu luvo lokunxibelelanisa uphawu lufuna umgaqo-nkqubo wentengiso kunye nokuqhubeka kwakho nokuzibandakanya. Abathengi abanokubakho kufuneka bakhuliswe ngobumnene, bahlakulela ukuzithemba kwabo kuphawu lwakho.
Dibana neSemalt Web Service
Ezi zixhobo ze-Intanethi zichazwe ngasentla ziya kutsala abathengi abatsha kwaye zikhulise umvuzo wakho. Inani labo likhulu ngakumbi, kodwa zonke azihambi ngaphaya kwemida yendawo ekhonzweyo. I-Arhente yethu yedijithali inikezela abathengi bayo kungekuphela izixhobo zentengiso ezisebenzayo, kodwa kunye nesicwangciso esiya kukuvumela ukuba wandise amandla e-injini yokukhangela. Ukuba ufuna ukwahlukana nengingqi yakho, ilizwe, ilizwe, okanye ilizwekazi, unezixhobo ezithembakeleyo. Yisebenzise ukuze udume kwihlabathi liphela.
I-Semalt iya kukukhokelela kwiindlela ezifihlakeleyo zeenjini zokukhangela, ukhetha amagama aphambili ahambelana ngokuthe ngqo nomsebenzi wakho wentengiso. Phantse kwangoko, uya kufumana yonke idatha efunekayo malunga nomzi mveliso uphelele, ukusebenza ngempumelelo kokhuphiswano, kunye nodumo. Uya kukwazi ukubukela inkqubela phambili kuthungelwano lwentlalo, ukhulisa ubukho bakho rhoqo ngemizuzwana.
I-SEO ayizukuphulukana nokubaluleka kwayo kwinkulungwane yamashumi amabini ananye. Imalunga nokugcwala kwitrafikhi ukuba uphawu lwakho luya kuyifumana ngeenjini zokukhangela. I-Semalt iya kukunceda uthathe isikhundla esizinzileyo. Utyalomali oluncinci kunye nokubambisana rhoqo kunye neengcali zethu kuya kunika umphumo omangalisayo. Iimpazamo zakho zeshishini zinokupheliswa ngendlela ehlelekileyo. Ezinye iintsilelo zinokwenzeka, kodwa isicwangciso esiliqili esiliqili esinokumelana noxinzelelo kwintengiso. Khetha isicwangciso esiliqili kwimarike yakho uze usenzele yona.
Ukubonakala kukaSemalt kwakumiselwe kwangaphambili kuphuhliso lwe-Intanethi. Iingqondo eziqaqambileyo aziqhelekanga, kodwa ukuba zikwiqela elinye, kwenzeka ummangaliso. Ummangaliso wenzeka ngo-2013 xa abantu abaninzi abalumkileyo ngokwenene bagqiba kwelokuba bajoyine amandla kunye nokudala uSemalt. Inkampani inabasebenzi bayo kwihlabathi liphela. Namhlanje, abafana abancinci nabathembisayo akudingeki ukuba baye kwenye indawo ukubonisa ubungqina bobuhle babo. Ngamnye kubo unasemva kwakhe kwimfundo esisiseko kunye nezakhono kwiiprojekthi ze-IT.
Ukuchonga ishishini lakho, akukho mfuneko yokuba ume emgceni. Akukho mfuneko yokuphinda ivili likunike unyango. Ukufikelela kwiziphumo eziPhambili zikaGoogle, kufuneka uqhagamshelane neengcali zeSemalt. Sine pilisi ezakuba negalelo ekukhuleni kwakho. Unyango lwethu lusebenza, nokuba kungabesiphi na ilizwe, ilizwe, okanye ilizwekazi. Ngaba ufuna i-smartphone yakho ifumane iifowuni ezivela kubathengi ngokuqhubekayo? Ngaba ufuna ukuba i-imeyile yakho izaliswe yonke imihla ngamakhulu ii-imeyile ezingafundwanga? Ngaba uyafuna ukuphakamisa ireyithingi yenkampani yakho ukuba ibe namanqaku aphezulu? Ngaba uyafuna ukunyusa umvuzo wakho ngezibini, ezintathu, njalo njalo? Yonke into ilula. Ukuba ukulungele ukukhula kwishishini lakho, qhubeka ufunda eli nqaku.
Izixhobo ze-Semalt ze-SEO zisetyenziswa ngabathengi abavela kumazwe aliqela kwihlabathi liphela. Ngaba uthetha isiNgesi kakubi? Abasebenzi bethu baya kuthetha ulwimi lwakho lwenkobe. Kwiwebhusayithi yenkampani, unokwazi ngamnye wabo. Kukho ukuphononongwa kwabathengi abanombulelo. Ezi ayizizo ezenzelwe ibali ezingasekelwanga kwizinto ezibonakalayo. Wena ngokwakho ungandwendwela iisayithi zeenkampani eziphumeleleyo nezincedileyo uSemalt ukuba abe nempumelelo:
INKONZO YENDALO (iZiko leeNkonzo ze-Apple). Le nkampani yase-Ukraine yathatha ithuba le-Semalt FullSEO kwaye yonyusa ukugcwala kwe-organic ngamaxesha amane kwiinyanga ezili-10!
I-Zaodrasle.si. Ivenkile yesini yaseSlovenia esabelana ngesondo ibonelela ngemveliso kunye neenkonzo iminyaka emithandathu. Kwiinyanga ezilishumi zokusebenzisana noSemalt, le ndawo inyuse indlela yokukhangela kwezinto eziphilayo nge-520%, kwaye yandise inani lokundwendwela inyanga nganye nge-1216. Namhlanje, iZaodrasle.si yinkampani ekhokelayo eSlovenia kwicandelo layo.
Portal yokukhangela kunye nokuthenga iifrigises. I-SEO Ngaba uFrankling ibanga ukuba iphakheji ye-FullSEO incede ishishini lakhe ukwandisa inani lamagama aphambili kwiGoogle TOP-10 ukuya kuma-5782, kunye nokugcwala kwabantu ngama-303% kwiinyanga ezili-9 zokuqala. Namhlanje, le nkampani yenye yeendawo zokuqala kumzi mveliso we-franchise e-United Kingdom.
Nawuphi na umsebenzisi we-Intanethi uyazi ukuba yeyiphi injini yokukhangela. Ngokuqinisekileyo usebenzise enye yazo. Namhlanje zininzi zazo, kodwa uGoogle ngowona waziwayo. Isebenza njani injini yokukhangela? Ungena kwisicelo kwaye ufumane uluhlu lweesayithi ezifunyenwe nguGoogle, iRambler, okanye iYandex. Qaphela ukuba ezinye iisayithi ziwela kwindawo yokuqala, ngelixa ezinye zisalela kude kakhulu. Njengoko amanani abonisa, isabelo sengonyama sabasebenzisi sivula kuphela amakhonkco akwisikhundla sokuqala. Ukungena kwi-TOP-10, kuya kufuneka uphathe uluhlu lwamanyathelo okonyusa isikhundla sendawo kwisalathiso sikaGoogle kwimibuzo yangaphambi kokusebenza.
Ukubandakanya izixhobo ze-SEO
Iinjineli zeSemalt ziyayazi indlela yokubeka indawo kwindawo yokuqala kuGoogle TOP 10. Siza kwandisa kakhulu ukuthengiswa kwezithuthi kunye nokuthengiswa kwe-Intanethi. Ukunyuselwa kwi-Intanethi kunokusebenza kuzo zonke iinkampani ezinabaphulaphuli abanokubakho abafuna iimveliso ezifanayo okanye iinkonzo kwi-Intanethi. Ngokwezibalo, inani labasebenzisi be-Intanethi liyakhula minyaka le. Namhlanje, ngaphezu kwesinye kwisithathu sabemi behlabathi basebenzisa i-Intanethi. Kutheni le nto abaphulaphuli benomtsalane kangaka kwishishini lakho? Inokuhlawula. Amashumi kunye namakhulu amawaka abasebenzisi bayijonga mihla le iimpahla zakho kodwa bafumane iimpahla zokhuphiswano. Kungenxa yokuba kukhuphiswano olusebenzayo ngakumbi sele zithathe ezona ndawo zibalaseleyo kwiziphumo zophando. Ungazithatha ezi ndawo elangeni. Ukwenza oku, kuya kufuneka uqale ukusebenza kwi-injini yokukhangela yewebhu.
Kwifomu elifutshane nelifikelelekayo, siya kuchazela iindwendwe ukuba zenzani. Ividiyo yokukhuthaza ishishini lakho iya kunceda ukutsala abathengi abatsha kwaye yandise ukuguqulwa.
Ukuphononongwa kwendawo yentengiso
Kwizinto zangoku, ulwazi ligazi leshishini. Ukunqongophala kwayo kukhokelela ekungangeni kakuhle emzimbeni. Ukuhlala usazi kwaye ulawula ishishini lakho, sebenzisa idatha yethu yohlalutyo, kunye noqikelelo ngenkqubela phambili yakho. Lawula ishishini lakho kwi-Intanethi kunye neengcali zeSemalt!
Ngaphezulu kwamawaka amathathu ezigidi abathengi abanokuba nengxaki yokuthenga imveliso yakho. Kutheni le nto bengakwazi ukwenza le nto? Izigidi zezimbangi ezinokubakho azikuvumeli ukuba ungene kuGoogle uPhezulu. Phakamisa ishishini kwinqanaba eliphezulu! Fumanisa iindlela ezintsha zokuthengisa kwaye uphumelele ukhuphiswano! Uyenza njani? Khetha iingcali zokwenyani ezinamava abanzi. Yiba ngumthengi weSemalt namhlanje! Njengomthengi, uyakufumana ipakeji epheleleyo yeenkonzo, ezibandakanya ukuphuculwa, ukuhlengahlengiswa kwakhona, kunye nokukhuthaza ivenkile yakho online, kunye nenkxaso yobungcali. Ngokukhetha i-Semalt, unokuqhuba ngokulula ishishini lakho kwi-Intanethi kwaye ube ngu-NYE.
Abaqeqeshiweyo abanamava banqwenela ukusebenzisana nawe kulo naliphi na ilizwe eMhlabeni, unyaka wonke, nangaliphi na ixesha ujikeleze iwotshi. Aba bantu baya kuba nakho ukuyiqonda ngokucacileyo nayiphi na into yorhwebo nge-e.
Ipotifoliyo yeSemalt ibandakanya iimeko ezingaphezulu kwama-800,000 ezigqityiweyo kubaxumi abangaphezu kwama-300,000. Zonke iiprojekthi ziyafumaneka kulwazi lwethu.
Utyalomali oluncinci ekuqhubeleni phambili iprojekthi yakho kunye neziphumo ezilungileyo ngokwenene.
Sisoloko simangalisa abathengi bethu ngamaxabiso atshintshayo kunye nexabiso elinikezelwayo.
Yintoni uKwenziwa kweNjini yokuKhangela epheleleyo?
Ishishini liya kuba phantsi kolawulo lomphathi kunye neqela lethu le-SEO. Siza kujonga indawo yakho kwiifilitha zikaGoogle kwaye siqulunqe iqhinga lokulandela. Phakathi kwezinye izinto, iingcali zeSemalt ziya kukhetha awona magama aphambili anokutsala umdla ekujolise kuwo. Siza kuhlalutya ubume bendawo kunye nokusasazwa kwamagama aphambili, kunye nokukhetha amaphepha okukhuthaza amabinzana afanelekileyo. Kubalulekile ukuba uqokelele ulwazi malunga nabantu okhwele nabo ukuze udibane nabo bexhobile ngokupheleleyo.
Uyenza njani indlela yokufumana ulwazi kwi-Intanethi?
Ukuthatha ithuba kwisitolo se-intanethi ngaphezulu kweembangi, kuya kufuneka ususe izithintelo ezithintela ukukhuthaza. Sinikezela ngokulandelelana kwamanyathelo anokukubeka kwindawo yokuqala:
ukwenza iithegi zemeta ezihambelana namagama aphambili;
ukuphucula ikhowudi ye-HTML;
ukwenza iithegi kunye neempawu ukuba imigangatho yanamhlanje yeenjini yokukhangela ziya kuhlangabezana.
Ukusebenza nako kuthetha ukuvala amakhonkco aphukileyo kunye nokudala ubuninzi beekhonkco zoncedo ezixhasiweyo. Ukuhlela iirobhothi.txt kunye neefayile ze-.htaccess ziya kuphucula kakhulu ukubonakala kwesiza sakho kumgangatho wenjini yokukhangela.
Ngamagama amakhulu kunye namagama amakhulu, akunjalo? Ukugcina uphume ekudidekeni nasentloko ebuhlungu, asidwelisi apha onke amanyathelo “onyango”. Ngoku uyayibona indlela ekunzima ngayo ukuthatha indawo yokuqala kwintengiso kunye nokuthandwa kwiWebhu eBanzi yeHlabathi. Ukukhuthaza i-SEO ngenene kufuna ulwazi olukhethekileyo kwaye kusekwe kumava eeprojekthi zangaphambili. Iqela labaselula, abanomdla, nabaphumeleleyo bakulungele ukukunceda. Sisonke siza kuphumeza umkhankaso we-SEO osebenzayo kwaye senze ishishini lakho ukuba libonakale kubandwendweli kunye nabo bangathengekayo. Impumelelo inokwenzeka. Iingcali zethamsanqa. Iqela leSemalt liya kuba yinjini yakho enamandla kwindlela yodumo kunye nokuchuma ukuba uyafuna.
Unokuhlala naphi na emhlabeni kwaye uthethe naluphi na ulwimi. Ungalungisa izixhobo ze-Apple eMinsk okanye uthengise izindlu nomhlaba eMelika. Ngokuqinisekileyo siya kufumana isisombululo kwishishini lakho kwaye sikhuthaze iwebhusayithi yakho. Siyayazi ukuba isebenza njani kuba sisengozini. Yikhumbule ishishini lakho kwaye masikukhuthaze. Sisonke siya kuphumeza okungakumbi!